'Dead Man Down' no horonantsary vaovao # 2 ao amin'ny Netflix - Fialam-Boly
Iraisam-Pirenena Fomba Fanamboarana Products Amboary Eo Noho Eo Fanamarihana Momba Ny Sarimihetsika Hafa Fironana Anontanio The Expert Beauty Bridal Teknolojia
Ity Colin Farrell Flick ity no horonantsary vaovao # 2 ao amin'ny Netflix & Io dia miaraka amin'ny hetsika
Vonona ny popcorn-nao, ry tompokolahy sy mpivarotra, satria ity sarimihetsika feno fihetsika ity, Lehilahy maty , mahazo vahana amin'ny Netflix.
Zava-dehibe ny manamarika izany Lehilahy maty sady tsy famotsorana vaovao no a Netflix tany am-boalohany . Tany amin'ny voalohany izy dia nahatratra ny sinema tamin'ny 2013 ary vao tsy ela akory izay no azo jerena ao amin'ny serivisy streaming, izay nitondrany ny laharana faharoa tamin'ny lisitry ny sarimihetsika Netflix nozahana indrindra. (Ao ambadika ao io ankehitriny Ny Mitchells vs. ny Masinina ary mialoha biby goavam-be , Madagascar 3 SY Ny fahamarinana rehetra .)
Ny sarimihetsika dia mitantara ny tantaran'i Victor (Colin Farrell), mpilalao ganglandy vao misondrotra izay niditra an-tsokosoko tamim-pahatokisana ny fanjakan'ny heloka bevava an'i Alphonse (Terrence Howard). Na izany aza, tsy manaraka ny fahefana i Victor (toy ny andrasan'ny maro). Fa kosa, mitady valifaty amin'i Alphonse izy, izay tompon'andraikitra amin'ny famotehana ny fiainany sy ny asany. Mandeha mandrahona ny raharaha rehefa manome azy ultimatum ny mpifanolo-bodirindrina amin'i Victor, Beatrice (Noomi Rapace) rehefa avy nanala sarona ny tsiambaratelony mainty.
Ankoatra an'i Farrell, Howard ary Rapace, Lehilahy maty misy kintana Dominic Cooper (Darcy), Isabelle Huppert (Maman Louzon), Luis Da Silva (Terry), Wade Barrett (Kilroy), Franky G (Luco), Declan Mulvey (Goff), John Cenatiempo (Charles), Roy James Wilson ( Blotto), Stephen Hill (Roland), Aaron Vexler (Paul), Accalia Quintana (Delphine), James Biberi (Ilir), F. Murray Abraham (Gregor), Andrew Stewart-Jones (Harry), William Zielinski (Alex) ary Armand Assante (Lon).
Vao mainka nampientam-po ny alin'ny sarimihetsika.
Te hanana seho ambony sy sarimihetsika ambony indrindra any Netflix halefa amin'ny boaty fampidirana anao? Kitiho eto .
Mifandraika: Apple TV + dia nanambara ny daty premiere ho an'ny seho Prince Harry vaovao - ary manambara ny fisehoan'ny Lady Gaga
Sokajy Fironana Products Vaovao Momba Ny Lamaody
ny fomba hahazoana fanafody ara-pahasalamana volo an-trano
mifanaraka indrindra amin'ny leo
ny fomba ahafahantsika manakana ny fianjeran'ny volo
tendrony tsara indrindra ho an'ny zipo
ny fomba fijanonana volo latsaka lahy
tantaram-pitiavana amin'ny sarimihetsika anglisy